Sailthru: Tayadoow, otomatiga iyo samatabbixinta | Martech Zone
Talaado, Disembar 17, 2013 Talaado, Disembar 17, 2013 Douglas Karr
Waxaan galeynaa xilli xiise leh markay tahay xog weyn iyo shaqsiyeyn. Madal ay ka mid yihiin Sailthru waxay shakhsi ka dhigi kartaa inta jeer iyo mawduuca farriinta aad ku direyso moobaylka ama emaylka - ka dibna aad shakhsi ka dhigto waxyaabaha ku jira barta uu adeegsaduhu ku degaayo. Waxaan qoraayey muddo dheer in xaddidaadda casriga Analytics ayaa ah inay kicinayso oo keliya su'aalo badan, oo aan ahayn jawaabo dhab ah. Nidaamyada shakhsi ahaaneed sida Sailthru waxay beddelayaan qaabka - qaadashada xogta falanqaynta iyo hagaajinta khibrada booqdaha si kor loogu qaado dakhliga… isla markaana si toos ah loogu sameeyo farriinta iyo shabakadda.
In kasta oo shakhsiyaddani ay soo saareyso waayo-aragnimo adeegsi oo sarreysa iyo beddelaad sarreysa, waxaan xiiseynayaa sida raadinta iyo bulsheed u gaari doonaan. Haddii aan waayo-aragnimo shaqsiyadeed leeyahay… fursadaha ayaa ah in Googlebot uusan sameynin. Ama hadaan la wadaago waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed, miyaad isku mid heli doontaa? Malaha, ama maya. Waan arki doonnaa… laakiin hadda, aaladaha shakhsiyadeed ee shakhsiyadeed ayaa keenaya kaqeybgal wanaagsan iyo beddelaad. Waxay umuuqataa maalinta halbeegga suuq geynta iimaylka kaligiis inuu naga dambeeyo!
Adoo kaxeynaya hawlgal qoto dheer, barnaamijyada sida Sailthru ayaa la cadeeyay inay kordhinayso guud ahaan dakhliga. Waa tan sida:
Isgaarsiinta khuseysa iyo waqtiga kicisay - Xalka Sailthru Smart Strategies wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dejiso heer sare faleebo ololeyaal loogu talagalay in si otomaatig ah dib loogu hawlgeliyo isticmaaleyaashii hore, loo dardar-geliyo iibsiyada soo noqnoqda, dib-u-qabashada gaadhigii laga tagay, oo la bixiyo maxkamad bilaash ah, iwm xilliyada ugu habboon.
Qoraal shaqsiyeed iyo talooyin - Sailthru tikniyoolajiyadda lahaanshaha waxay raadraac ku sameysaa barta, emaylka, moobiilka, qadka iyo dhaqanka bulshada si loo horumariyo muuqaalka xiisaha macaamiil kasta oo gaar ah. Halkaas, waxay si otomaatig ah u buuxin karaan dhammaan isgaarsiintaada iyaga oo wata waxyaalaha iyo alaabada ugu habboon.
Ka dhaaf qeybta kala geynta suuq geynta la bartilmaameedsaday - u adeegso Sailthru si aad u dhisto kooxo adeegsadayaal firfircoon oo casri ah oo ku saleysan xogta habdhaqanka ballaaran ee laga heli karo macmiil kasta.
Maareynta dakhliga oo macquul ah - Sailthru ee dakhliga caadiga ah iyo cabbirada bogga ayaa awood u siinaya suuqleyda iyo kooxaha tifaftirka / wax soo saarka si loo wanaajiyo ololahooda suuqgeynta iyo dhiirrigelinta ku saleysan doollarka dhabta ah halkii laga furi lahaa ama la riixi lahaa.
Tags: qalabaynBixintakordhinta dakhligaHagaajintatayadoodiishakhsi ahaaneedsailthru
Tiger Pistol: Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar ee Facebook